सनराइज बैंकको ऋणपत्रमा कम देखियो सर्वसाधारणको आकर्षण | गृहपृष्ठ
Home लगानी सनराइज बैंकको ऋणपत्रमा कम देखियो सर्वसाधारणको आकर्षण
on: May 02, 2019 लगानी
सनराइज बैंकको ऋणपत्रमा कम देखियो सर्वसाधारणको आकर्षण
वैशाख १९, काठमाडौं (अस) । सनराइज बैंकको ऋणपत्रमा सर्वसाधारणको आकर्षण कम देखिएको छ । चैत २० गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको ४ लाख कित्ता ऋणपत्रमध्ये १ लाख कित्तामात्र विक्री भएको अवस्था छ । विक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटलका अनुसार हालसम्म ९०० जना आवेदकबाट रू. १० करोड बराबरको १० लाख कित्ता ऋणपत्रको लागि आवेदन परेको छ ।
यस आधारमा सनराइजको ऋणपत्र हालसम्म २५ प्रतिशत मात्र विक्री भएको छ । बैंकले कुल १० लाख कित्ता ऋणपत्रमध्ये ४ लाख कित्ता सर्वसाधारणको लागि विक्री खुला गरेको हो । यस ऋणपत्र खरीद गर्ने बिहीवार अन्तिम दिन रहेको छ । छिटोमा चैत २५ गतेसम्म आवेदन दिने अवधि तोकिएपनि सो अवधिमा तोके बमोजिम आवेदन नपरेपछि ढिलोमा २०७६ वैशाख १९ सम्म विक्रीमा खुला गरिएको हो ।
प्रति कित्ता रू. १ हजार मूल्य तोएिको यस ऋणपत्रमा न्यूनतम २५ कित्ता र अधिकतम ४ लाख कित्ताको लागि आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ । बैंकले वार्षिक १० प्रतिशत ब्याजदरमा ५ वर्ष अवधिको ऋणपत्र जारी गरेको हो । ऋणपत्र खरीद गर्न चाहाने लगानीकर्ताहरुले सनराइज बैंकका सम्पूर्ण शाखा र सि आस्बा सेवामा सहभागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ । बैंकले यो ऋणपत्र निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट चैत १ गते स्वीकृति पाएको थियो ।
गल्फ क्लबमा सनराइज बैंकको वृक्षरोपण
सनराइज बैंकको डिवेञ्चर सूचिकृत
सनराइज र नेपाल बैंकले मागे वार्षिक डिम्याटको शुल्क
सनराइज बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा श्रेष्ठ